Inwe Mmụọ Zar na Central Sudan - WRSP
ZAR IME NKE AKWOSKWỌ AKW .KWỌ
Unknownbọchị amaghi: nkwenye Zar na ihe onwunwe sitere na ọwụwa anyanwụ na etiti Africa.
Narị afọ nke iri na ise bụ: Ntughari nke alaeze Funj nke e guzobere ọhụrụ na Islam mere, nkwenkwe na omume Sufi gbasakwara n'akụkụ etiti Nile.
1839: Edekọtara akụkọ mbụ banyere emume zar site na Etiopia site n'aka ndị ozi ala ọzọ Christian.
1880: Zainab bit Buggi, nke mechara mara dị ka nne nne Zainab (Haboba Zainab) mụrụ na Omdurman, Sudan. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a kpọgara ya n'ebe ugwu Ijipt.
1883–1897: Akụkọ ederede nke ihe onwunwe ndị metụtara ndụ lanarịrị steeti Mahdist na Sudan.
1896–1898: Zainab laghachiri Sudan tinyere ndị agha Anglo-Egypt na onye agha aha ya bụ Mursal Muhammad Ali.
1898–1955: E nwere otu Condominium (Anglo-Egypt) na Sudan.
1905: E zigara Zainab na Mursal dị ka ndị na-achị obodo na Makwar, bụ obodo dị na Osimiri Blue Nile.
1910: Mgbe ọnwụ Mursal gasịrị, Zainab lụgharịrị ma soro ụmụ ya kwaga n'otu ime obodo dị nso na Sinja. Di ya ọhụụ, Marajan Arabi, bụ onye ndu dị ike na zar.
1930: Di ya nwụrụ ọzọ, Zainab laghachiri Makwar / Sennar ka ya na ọkpara ya bụ Muhammad biri. Ha niile wuru ulo na-eto eto nke zar. N’ebe ahụ ka Zainab zụrụ ọgbọ na-esote ndị na-arụ ọrụ ọrụ burei, n’oge nkwenkwe na omume zar na-agbasa ngwa ngwa.
N'etiti narị afọ nke iri abụọ: nke kachasị egwu, nkwenkwe ndị Alakụba na-emetụta Wahhabi bilitere na Sudan.
1956: Ndi Sudan nwere nnwere onwe site na Britain.
1960: Nne nne (Haboba) Zainab nwụrụ.
1983: etinye iwu iwu Sharia na Sudan.
1989: Ndi agha ndi agha na Sudan dugara nguzobe nke ndi Islamist, nke onye isi ochichi Omar al-Bashir duziri.
1990s: A machibidoro ememe Zar iwu ma kpagbuo ndị isi.
2000: A machibidoro mmachibido iwu emume zar iwu, ụmụ nwanyị gara n'ihu na-eme mmemme zar na ọnọdụ nzuzo.
2019: A kwaturu ọchịchị Islamist.
Nkwenye na mmuo nke ndi amara amara dika zar (ma obu sar) bu ihe zuru ebe nile na ugwu Africa na Middle East, site na Morocco rue Sudan na Etiopia, na Iran, tinyere uwa nile na obodo diasporic ebe otutu ndi mmadu bi ugbu a. bụ nke ndị Alakụba na-emekarị, agbanyeghị na ndị otu Kristi, Falasha, na animist, ọha mmadụ. Ọ bụ ezie na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na-ekwere nkwenkwe n'ọtụtụ ebe, ndị ọkachamara na ndị isi taa bụ ụmụ nwanyị.
A kwenyere na nkwenkwe na omume nke Zar dị ezigbo ochie na ọwụwa anyanwụ na etiti Africa, mana mmalite ha na akụkọ ntolite mbụ ha efuola. Akuko mbu edere ede banyere ihe omume sitere na Etiopia, bido na 1839 (Natvig 1987). Ndị ozi ala ọzọ JL Krapf na CW Isenberg hapụrụ nkọwa dị iche iche nke otu nwanyị nke nwara ime ka mmụọ ya ma ọ bụ mmụọ ya nwee mmụọ. Imirikiti atụmatụ ha kọwara bụ ka a na-ahụ n'ememe emume ndị a na-eme n'oge a. Mgbe e mesịrị akụkọ ihe mere eme nke narị afọ nke iri na itoolu sitere n'Ijipt (Klunzinger 1878) na Mecca (Hurgronje 1931) mere ka o doo anya na ka ọ na-erule n'oge ahụ, nkwenkwe na ememe zuru ebe niile. Ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta taa kwenyere na mgbasa nke nkwenkwe zar bụ ihe jikọrọ ya na ndị agha Ottoman na narị afọ nke iri na itoolu, ọkachasị ọrụ ndị agha ohu na ndị tụkwasịrị obi, nke ha si na ya gafee ọnụ ọgụgụ ka ukwuu. Otutu nke ememe na mmemme taa bụ nke sitere n'oge ahụ.
Ihe ndekọ a dabere na nyocha nke ubi site na Republic of Sudan (nke a na-akpọkarị Sudan), ebe zar na-aga n'ihu na-adọrọ adọrọ ma na-agbanwe agbanwe, ọbụlagodi n'ime steeti Islamist na-adịbeghị anya (1989-2019). Mmetụta nke Islam, ọkachasị Sufi Islam, nke chịrị akụkụ a nke Africa ruo narị afọ anọ, pụtara ìhè na emume zar na nhazi. Ruo ọtụtụ n'ime akụkọ ntolite ya, zar dị adị n'ime nnukwu ọnọdụ Islam. A kọwawo Zar nke ọma na Sudan (ọkachasị al-Nagar 1975; Boddy 1989; Constantinides 1972; Kenyon 2012; Lewis et al. 1991; Makris 2000; na Seligman 1914). Enwere onu okwu banyere zar na Sudan ebe obu na oge iri na iteghete, akuko na Constantinides (1972) na Kenyon (2012). N'oge ọchịchị Mahdist (1883-1897), na ikekwe n'oge gara aga, ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke na-emekọ oriri ọnụ site na mmụọ dị iche iche, nke a maara dịka Red Wind, al-rih al-ahmar, ma ọ bụ zar. A na-akpọ mmụọ ndị ahụ n'onwe ha mgbe ụfọdụ dị ka al-dastur, nke a sụgharịrị iche iche dị ka "mgbabere" ma ọ bụ "iwu," na-atụ aro ịkọwapụta mmụọ na ụwa mmadụ.
N'oge gara aga, ụmụ nwanyị na-echeta na e nwere ọtụtụ ụdị zar dị iche iche a na-eme na Sudan: zar burei, zar tombura, na zar nugara, ma ọ dịkarịa ala. Ọ bụ ezie na ememe ha dị iche, ọdịbendị dịgasị iche iche maka ha na mmụọ ọ bụla dịgasị iche, ha niile dabere na nghọta yiri nke ụwa mmụọ mmụọ. Taa naanị burei na tombura dị na Sudan, na na omume enwere ugbu a oke ego, mmekorita, na akụkọ ntolite.
Taa okwu ahụ zar na-ezo aka n'ọtụtụ ihe. O bu udi nke mo puru iche, o na akowakwa onodu nke onye mo ahu nwere. Ọ bụ ụdị ọgba aghara nke ihe onwunwe ahụ kpatara, yana emume metụtara na mmụọ mmụọ, nke nwere ike ịgụnye ịgba ụda, ịbụ abụ, ịchụ àjà, nnọchi anya ndị ọzọ nke ndị ọzọ, oriri oriri, mkpasu iwe, niile yana enweghị atụ na esemokwu. Mgbe ụfọdụ a na-achọta ụmụ nwoke n'ememe zar, ma nwee ike ikwu na ha nwere nghọta ọkachamara banyere ihe ahụ. Otú ọ dị, ọtụtụ mgbe, ụmụ nwanyị na-ele ha anya dị ka nwoke idina nwoke na nwanyị n'ihe omume ahụ, ndị maara na ihe ka ọtụtụ n'ememe zar taa na-ewere ọnọdụ n'anya nwoke; ndị nwoke sonyere na-emeso nnọọ dị iche iche. Nke a bụ nnoo nke ụmụ nwanyị.
Ihe omumu ihe omumu nke a site na obodo Sennar, nke di na etiti Sudan, gosiputara udiri akuko n’akuko otutu ndi nwere onwe ha n’ulo ndi Burei no na mba a, na eme ka njikọ di n’etiti zar na ndi agha Ottoman, ma na anochita kwa ngbanwe nke ngosiputa nke mo n’oge. Ọ pụrụ iche naanị n'ihi na ụmụ ụmụ onye guzobere otu a hapụrụ ndekọ banyere akụkọ otu ha (na Kenyon 2012). Onye guzobere ya, nwanyị ka na-echeta dịka Zainab bit Buggi (ada nke Buggi) ma ọ bụ nne nne Zainab (Haboba Zainab) mụrụ na Omdurman n'ihe dịka 1880, oge mpaghara a ka bụ ebe nchekwa nke Alaeze Ukwu Ottoman. Ihe omuma ole na ole banyere ndu ndu ya adigide, mana ndi ikwu ya chetara otua mgbe edere ya na nwata ka eburu ya gaa Egypt di elu, ebe ya na ndi ulo eze Ababda, Agha Osman Murab rapara. Oge ọpụpụ ya site Omdurman ka ikike Ottoman dara, aha nna ya (ma ọ bụ "onye nwe ya"), yana ndụ nwata ya n'ụlọ nwoke echetara dị ka al-agha, aha ndị agha Ottoman, ha niile na-akwado ihe gbasara nke puru omume na amụrụ ya site na ohu, yana njikọ ndị agha. Zainabmụ Zainab mechara cheta etu ọ dị mgbe ọ ka bụ nwa agbọghọ na Upper Egypt ka ọ bịara mata mmụọ mmụọ, n'agbanyeghị na onweghị ihe akaebe na-egosi na ọ nọ na-eme emume ya n'oge ahụ. A ka na-echeta ihe banyere oge a "n'obí eze" n'ụzọ doro anya n'ememe zar, nke nne nne Zainab wetara Sennar.
N'oge ụfọdụ, Zainab zutere onye agha aha ya bụ Mursal Muhammad Ali, onye Ijipt nke Sudan (Dega). Ya na ya laghachiri Sudan, otu akụkụ nke mbuso agha Anglo-Egypt nke 1896–1898. Na agha Karari, nke di ugwu nke Omdurman, usuu ndị agha a meriri ndị agha na-eguzosi ike n'ihe nye Khalifa 'Abdallahi. E weghachiri ikike Ottoman n'aha "Condominium", nke ndị Britain (al-Khawajat keere òkè (opekata mpe)).) na ndị isi Egypt (al-Pashawat).
Zainab na Mursal nọrọ naanị obere oge na Omdurman tupu ha akwaga narị kilomita abụọ site na ndịda na obere obere ọchịchị na Osimiri Blue Nile, Makwar, guzobere iji debe ndị agha lara ezumike nka na ezinụlọ ha. Zainab biri ndụ nke nwunye onye ọrụ ugbo na n'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, ọ mụrụ ụmụ ejima, Muhammad na Asha. Mursal nwụrụ afọ ole na ole ka nke ahụ gasịrị, na Zainab mechara lụọ otu Marajan Arabi, na-akwaga n'obodo ya dị nso na Sinja, iri asatọ na ndịda nke Makwar. Marajan bụ onye ama ama na-arụ ọrụ zar nugara, n'agbanyeghị na anaghịzi eme nugara na Sennar, a ka na-echeta ike ya dị egwu. N'oge na-adịghị anya alụmdi na nwunye ahụ gasịrị, Zainab dara ọrịa. Marajan ghọtara na ọ bụ ezie na ọ na-arịa ọrịa zar, ọ bụghị nugara. A kpọrọ onye ndu zar burei, al-Taniyya (nke a makwaara dị ka Halima) ka ọ na-eme emume ụbọchị asaa zuru oke, ọ matakwara ikike nke Zainab na zar. Ozugbo Zainab gbakere, ọ malitere soro al-Taniyya zụọ ọzụzụ, na-amụta ịkpọkọta ndị mmụọ ma soro ha kwurịta okwu.
Nke a ga-abụ ntọala nke zar burei na Sennar nke oge a. Agbanyeghị na kabura nke oge a na Sennar enweghị njikọ, onye isi ili na 2001 chetara ikike Zainab na nkwanye ugwu:
Sennar zar taa bu nke si na Zainab. Mgbe anyị matara, anyị chọpụtara na o nwere ya. . . . Ihe nile sitere n'aka nwanyị ahụ a na-akpọ al-Taniyya, nke ndị Turkey, si mashaikha kabira (onye isi ndị isi nwanyị) (Kenyon 2012: 51).
Ka ọ dị ugbu a, nwa nwoke Zainab bụ Muhammad ghọrọ nwa akwụkwọ na-anụ ọkụ n'obi nke Marajan, na-egosipụta ike dị ike na nugara. Ọ ghọrọ onye agha, mana mgbe ọ lara ezumike nká (ihe dị ka 1925) ọ laghachiri n'ụlọ nna ya na oke na Makwar / Sennar, ebe ọ malitere n'oge na-adịghị anya dị ka onye ndu ndị isi egwu. Mgbe Zainab di ya nwuru nke ugboro abuo (nari 1930), o laghachitere ibi na Muhammad na nwunye ya Sittena. Ha mechaa, ha na-emekọ ọnụ n'otu ọnụ ụlọ ha, n'etiti obodo, na-ewulite nnukwu ndị ahịa na mpaghara ahụ. Ezinụlọ ahụ nwere ọganihu na akụnụba ha na-aba ụba ka e mechara jiri ụjọ tụgharịa. N'ime afọ iri atọ sochirinụ, Zainab nwetara aha ọma dịka onye ndu dị egwu na onye obi ebere. Themụ nwanyị ọ zụrụ ghọrọ ọgbọ nke ndị isi na-esote ọgbọ taa, ụlọ niile zar burei na Sennar na-ekwu na ọ bụ nne nne ochie Zainab.
Zainab nwụrụ na 1960, mana oge ọ na-eme zar na Sennar (1930-1960) bụ oge mgbe nkwenye na omume zar na-agbasa na Sudan (Constantinides 1991: 92), nke ndị ọchịchị Anglo-Egypt na-eleghara anya ma ọ bụ na-amaghị. Na narị afọ nke iri abụọ gara aga, omume a gara n'ihu, ruo mgbe ntuli aka nke 1989 dugara nguzobe nke ala Alakụba, n'okpuru nke a na-eme ihe n'echeghị echiche maka mkpagbu.
Nkwenkwe Zar na-adabere na ịdị adị nke mmụọ uhie, otu ụdị mmụọ nke na-ebi ndụ yiri nke mmadụ, ma bụrụ onye dị iche na mmụọ ojii, nke ọzọ bụ isi mmụọ. Nke ikpeazu, mgbe ufodu mara dika djinn, biri ebe ruru unyi ma di ize ndu, ma oburu na ha metu aru mmadu aka, o nwere ike wụa ma nweta ya, na-ebute nsogbu mgbe nile, tinyere oria, na ara. A ghaghị ịchụpụ mmụọ ndị dị otú ahụ dị egwu tupu onye nwe ụlọ ahụ agbakee, ihe ịma aka nke nwoke nsọ Alakụba nwere onyinye ọgwụgwọ pụrụ iche rụrụ.
Ndị mmụọ ọbara ọbara ma ọ bụ zar, n'aka nke ọzọ, na-arụ ọrụ ọma, n'agbanyeghị, dị ka ụmụ mmadụ ha nwere, ha nwere ikike imejọ na ọbụna omume dị egwu. N'adịghị ka mmụọ ojii, enweghị ike ịchụpụ ha, soro onye ọbịa nọrọ na ndụ ya niile. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu na onye ọ bụla nwere otu ma ọ bụ karịa n'ime mmụọ mmụọ ndị a na-acha uhie uhie, bụ nke a na-ekenyekarị, ọtụtụ mgbe site na onye ikwu na akara nwanyị. Ọ gwụla ma ọ na-enye nsogbu, mmụọ ahụ na-anọ jụụ, na-emeghị ihe ịrịba ama doro anya nke ọnụnọ ya, mana na-eme ka onye ọbịa ya mara banyere mmasị ya maka ụfọdụ nri, ma ọ bụ maka ihe akwa ma ọ bụ ọla. Ma, ọ bụrụ na ihe na-ewe ya iwe (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye kpọrọ oriri leghaara ihe ọ chọrọ anya), ọ nwere ike butere onye ọbịa ahụ nsogbu, dịka ọrịa ma ọ bụ nsogbu ezinụlọ. Mgbe ahụ a dụrụ ya ọdụ ka ọ chọọ ọgwụgwọ ya site na isoro onye ndu otu na-achị zar na-arụrụ ya ọrụ.
N'ịbụ nke a maara dị ka ifufe, Red Wind (al-rih al-ahmar), a na-atụle mmụọ mmụọ na ọkụ eletrik, nwee ike ịbanye n'ime oghere na ahụ siri ike, mana n'ime onwe ha na-adịghị ahụ anya na nke na-adịghị mma. Ha na-enweta njirimara a na-ahụ anya naanị site na ịnwe ụmụ mmadụ, ndị na-achị ọchị maka ihe ha chọrọ maka uwe, ngwa yana omume iji zere ọgba aghara ọzọ. Adị adị ha ziri ezi site na nkwenkwe zuru ebe nile na ha maara amuma Muhammad, kwuru ka a kpọtụrụ aha na Hadith (akụkọ nke okwu onye amụma ahụ na omume ya). Enwere ọtụtụ narị mmụọ mmụọ dị iche iche, ọnụọgụgụ na-edoghị anya, yana mmụọ ọhụrụ na-aga n'ihu na-apụta ma mmụọ ochie na-apụ n'anya ma ọ bụ na-echefu ma ọ dịkarịa ala. Arefọdụ bụ ndị a kpọrọ aha ma kọwaa nke ọma, ndị ọzọ maara nanị dị ka akụkụ nke otu ìgwè. Otú ọ dị, a na-ahazi ha niile “mba,” nke a na-ahụ otu ọnụ na Sudan zar taa ma na-egosipụta ọnọdụ akụkọ ihe mere eme nke mpaghara ahụ. N'ihe banyere usoro akpọrọ ha n'oge emume dị iche iche, ndị a bụ: Darawish, Pashas, ​​Khawajat, Habbash, Arab, Blacks, na (otu iche) ụmụ nwanyị (al-Sittat). A na-atụle ha n'okpuru ebe a.
Onwere otutu emume ana eme na Sudan taa, odi ka ma na zarure na kabura. Na ọkwa dị mkpa, onye isi otu otu mpaghara (nke a maara dị ka al-ummiya ma ọ bụ al-shaikha) dị maka ndụmọdụ, na-abụkarị n'oge ọ bụla n'ehihie ma ọ bụ n'abalị. Onye kwenyere na ya ma obu nsogbu ya puru inwe ogha na zar ka aduru ya icho ka aka ya di nkpa iji choputa ihe n’eme. N'ime ụlọ a na-edobekarị maka ime ihe omume, onye ndu ahụ mepere igbe ya (al-sandug) nke ihe eji eme emume, gụnyere ihe pụrụ iche pụrụ iche kwenyere na ọ ga-akpọ ndị mmụọ mmụọ, na ite nke icheku ọkụ na-atụba ihe nsure ọkụ ole na ole. Nke a ka ọ na - eji eme onwe ya aru ma ọ bụ sachaa ahụ ya yana ịmịnye onwe ya. Usoro a nwere ike iduga ya n'ọhụụ, n'oge nke ya na ndị mmụọ nwere ike ikwurịta okwu. Maka ọtụtụ akụkụ, mmụọ mmụọ anaghị ekwupụta okwu ọnụ, mana n'oge ahụ ọhụụ (na ụra ya mgbe e mesịrị) a na-ekwenye na onye ndu ahụ na ndị mmụọ mmụọ (s) nwere onye ahịa ahụ, iji chọpụta njirimara ha na ihe kpatara ya nke ọgba aghara ha. N’ụzọ a na-apụtachaghị ìhè, a na-agwa onye ọrịa ahụ ihe mmụọ ahụ chọrọ. N’oge mkparịta ụka ndị dị otu a, nke na-eme kwa oge, a naghị akụ egwu ma ọ bụ ite egwu, enweghị uwe pụrụ iche maka mmụọ, ọ nweghịkwa ihe ọreshụ refụ, belụsọ na onye ọrịa ahụ azụrụ onyinye ọkụkọ ma ọ bụ kpalakwukwu nke a ga-enye ndị zarị.
Ihe omume a bụ mmalite nke ọrụ mmadụ na zar na mmekọrịta ya na onye ndu obodo, onye ọ ga-arapara na ya ogologo ndụ ya niile. Ọ na-eleta onye ndu mgbe ọ bụla ọ chọrọ, na obere ego, nwere ike kpọtụrụ ndị mmụọ nwere ya site na nduchutu onye ndu. A ga-akpọ ya ka ọ gaa emume ndị ọzọ a na-eme na ụlọ onye ndu nke zar ma kwado ndị a otu o nwere ike site na ego na / ma ọ bụ ọrụ.
Oche, al-kursi, bu ihe eji eme emume nke oma ma oburu na nwanyi nke ndi otu ma obu karia nke ndi zaria nye nsogbu nke ukwuu nwere ike inye ya nkwado ya. Kachasị mma a kursi kwesịrị ịnọ ụbọchị asaa, n'agbanyeghị na mmefu a karịrị ihe onye na-akwado mmemme ahụ ga-ekwe omume, ụbọchị atọ ma ọ bụ ọbụlagodi otu ụbọchị omume ga-ekwe omume. Ndị mmụọ (na ndị ọbịa dị iche iche ha nwere), ka masịrị izu zuru oke nke ime mmemme. N'oge a, obodo dum (al-jama'a) a na-akpọ ndị mmụọ mmụọ ịbịa leta ndị ọbịa ha, ọtụtụ ụmụ nwanyị n'otu oge ahụ nwere otu mmụọ ahụ. Nke izizi ibadata n'oge emume niile bụ Darawish, mmụọ nke ndị nsọ Alakụba (Sufi). [Foto dị n'aka nri] womenmụ nwanyị ha nwere jalabiya na-acha ọcha (uwe na-enweghị ike na-ekpuchi ahụ dum ma e wezụga isi), kpuchie isi ha, ma dabere na Sufi na-aga ije, na-ele anya amamihe na nsọpụrụ. Mgbe Darawish pụọ, ụmụ nwanyị kwụsịrị akụ ha, na-atụgharị uche, na-enyo enyo, na-amakụ na ịmụmụ ọnụ ọchị nke ndị enyi ha. N’oge na-adịghị anya, egwu dị iche iche, abụ na ihe nsure ọkụ na-akpọ Pashas, ​​mmụọ nke ndị Ijipt narị afọ nke iri na itoolu ndị a maara aha ha, si “n'obí ndị ahụ” kpọmkwem. [Foto dị n'aka nri] womenmụ nwanyị ndị ha nwere mgbe ahụ wepụtara jalabiya ọcha ma ọ bụ ude, na onye ndu weputara fez hat (okpu) site na ihe ndi ozo, ka ndi mmoo nwee uto. Ozugbo mmụọ Pashawat niile lara, ụda a na-eti na-agbanwe ọzọ, kpọọ Khawajat, mmụọ nke ndị isi ọchịchị ndị Europe. Dressdị ejiji ha chọrọ dịgasị iche iche, ma na-adaberekarị n'otu uwe (ịchafụ, akwa olu) nke na-egosi ọdịiche dị na mmụọ. Omume nke mmụọ ndị a, n'oge na-adịbeghị anya, dị mpako na ị dụbiga mmanya ókè (ọbụlagodi mgbe a noụrụghị mmanya ọ bụla), nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Sudan gbara ume na ngwụcha narị afọ nke iri abụọ, mgbe mmekọrịta dị na West na-esiwanye ike. Ndị mmụọ Khawajat na-esochi Habbash (ndị Etiopia), ndị Arab (mmụọ nke ndị isi agha nomadic), na ndị isi ojii (mmụọ mmụọ ike si Central Africa), ndị na-egosipụtakwa ma ọdịmma ejiji na asụsụ ahụ. Mkpụrụ mmụọ niile a bụ nwoke. Otu ma ọ bụ mba nke ikpeazụ, ụmụ nwanyị, al-Sittat, gụnyere ụmụ nwanyị sitere na mba ndị ọzọ niile, n'oge gara aga na ugbu a. A na-eji ịnụ ọkụ n'obi echere ụmụ nwanyị Etiopia, mgbe ha letara, a na-eji ịnụ ọkụ n'obi egosi uwe na ọla dị oke oke.
A nabatara mmụọ pụrụ iche maka mmụọ, ma ọ bụ mmụọ, na-enye nsogbu onye na-akwado ihe omume ahụ. Maka ha, a na-achụ anụmanụ n'àjà, a na-enyekwa nri na ihe ọ specialụ beụ pụrụ iche (dịka ihe ha masịrị). Womenmụ nwanyị dị iche iche ha nwere niile na-eyi uwe na ngwa ndị a maara na-atọ ha ụtọ, ọtụtụ n'ime ha na-adọtakarị na narị afọ nke iri na itoolu. Ha nwere ike gbadata inweta ụmụ nwanyị karịa otu oge n'oge emume ahụ ma jiri nkwanye ugwu na nsọpụrụ dị ukwuu mesoo ha.
N'ime ọnwa nke iteghete nke Islam nke Rajab, n'ememe dị ka kursi, a na-atụ anya ka ụlọ ọ bụla ma ọ bụ ìgwè nke zarị nwee ikelele ekele, al-karama, nke mere na ọnwa niile ejiri ememme ekele na-aga n'ihu.. [Foto dị n'aka nri] N'oge a, onye ndu onwe ya bụ onye nnabata ahụ, nke ndị otu niile nke ụlọ ya na-akwado. Nke a bụ mgbe ọ na-egosigharị mmekọrịta ya na ndị mmụọ yana nweta mmata n'aka ndị isi ndị ọzọ, akpọrọ ka ha bịa na nke ọ bụla. Nke a bụ mmemme kacha eme eme kwa afọ na zar na onye ndu ọ bụla ketara ụbọchị ọ ga-emepe emepe karama ya. Naanị onye isi kachasị n'ọchịchị nwere ike ijide ekele ya na 27th nke Rajab, ụbọchị dị nsọ na kalenda Sufi.
Na mmechi, emume puru iche gbara “ichi” ma obu nraranye nke onye isi ohuru na zar. Nke a anaghị adịkarị; enwere naanị ụlọ ọrụ ise nke burei zar na mpaghara Sennar taa, na idu ndú bụ ntinye ndụ niile nke ọtụtụ na-achọ ma ọ bụ mmadụ ole na ole na-enweta ya. Ememe a na girding na-adọtakwa na nke kursi, na-ewe ụbọchị asaa, mana onye isi ọhụụ na ezinụlọ ya kwadoro nke a. Ngosipụta nke ya, ya na mmụọ niile dị n'ahụ ndị na-akwado ya, bụ njedebe nke emume ahụ. A na-eme nke a site n'aka onye ndu ya na ya zụrụ, ndị isi ndị isi ọzọ sitere na mpaghara ahụ na-enyere aka. Ememe a kapịrị ọnụ na-adabere na akara nke mmemme Sufi Brotherhood.
Malite na 1970s, e webatara usoro ọhụụ ọzọ na-ezighi ezi, nke a maara dị ka kọfị (al-jabana). Nke a butere ịba ụba nke ọrụ zar, mekwara ka ọ ghara ịdị ọnụ ala, yabụ karịa inweta ya, maka ndị nwere ego. Otu mmụọ dị ala Habbash (onye Etiopia) aha ya bụ Bashir nwere ummiya Rabha, nwa nwa nke Zainab, wee nye ya kọfị, dịka e lere anya na ọ kwesịrị onye Etiopia. O kwuputara na ya bu n'obi ileta ya na Sọnde ọ bụla (nke dabara adaba maka mmụọ Onye Kraịst) ma kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa kpọtụrụ ya. Afọ iri ka nke ahụ gasịrị, Bashir na-eleta (inwe) ọtụtụ ụmụ nwanyị ndị ọzọ gburugburu obodo ụbọchị Sọnde, na mgbe ụfọdụkwa ụbọchị ndị ọzọ. Maka obere ego, ndị enyi ha na ndị agbata obi nwere ike iso ya forụọ kọfị ma wetara ya nsogbu ha. N'adịghị ka mmụọ mmụọ ndị ọzọ, ndị na-ekwukarị okwu n'ekwu site na ummiya, Bashir na ndị ọbịa ya na-akparịta ụka, n'agbanyeghị na asụsụ Arabik dara ada, na-ejikarị njakịrị ma na-atọ ha ụtọ. [Foto dị n'aka nri]
Ka ọ na-erule mmalite narị afọ nke iri abụọ na mbụ, mmụọ abụọ ndị ọzọ na-eleta ndị nkwenye nwere ike zar, kwuru na ha bụ ụmụ nwanne nke Bashir, ma na-arụ ọrụ ndị yiri ya: Dasholay, nwanne ya nwoke nke ya na Bashir bụ nne Etiopia mana nwere nna agha Sudan, ma gosiputa omume ojoo, nke ka njọ kari Bashir; na Luliya, nwanne ha nwanyị, bụ mmụọ a ma ama, nke nwere ihe niile mara mma na nwanyị na mpaghara Sudan, yana bụ ndị ndị mmadụ na-echegbu onwe ha banyere mmekọahụ, gụnyere afọ ime, ịmụ nwa na idina ụdị onwe. [Foto dị n'aka nri] Ọ dị mma ịkọwa mmụọ atọ ndị a dị ka ndị ohu na-enweghị ike (al-khudam), na ka profaịlụ ha zuru ezu, ọ bịara pụta ìhè na ọ bụghị naanị na ha jikọtara n'ọkwá Ottoman, mana ha dabere na omenala ohu nke narị afọ nke iri na itoolu. Ọbụna nke dị ịrịba ama karị, ewu ewu nke mmụọ atọ ndị a (Bashir, Dasholay, na Luliya), n'ọkwa niile nke zar na-eme taa, na-eme ka ha bụrụ ndị isi kachasị mkpa na Sudan.
N'agbanyeghi nkwuputa okwu site n'oge ruo n'oge na nke ọzọ, enweghị nnukwu nzukọ na zar, burei ma ọ bụ kaburara, ọ nweghịkwa onye ndu niile a ma ama. Nhazi bu otutu obodo, obu ezie na achoputara okenye n’onodu a n’etiti ndi isi ochichi, o puru igbanwe oge. Otu n'ime nnukwu ọdịiche dị n'etiti zar burei na tombura, ka achọtara na nzukọ ha. Tombura dịtụ ka nke ọma, ya na onye isi nwoke (al-sanjak), okwu sitere na utu aha ndị agha Ottoman) na-elekọta ọtụtụ ndị isi otu nwanyị nọọrọ onwe ha, al-shaikhat ma ọ bụ al-ummiyat (pl.). Sanjak kwesịrị ịnọ n'oge emume ọ bụla, dị ka kursi ma ọ bụ karama, mana ị na-eme ihe omume kwa ụbọchị na-emetụta shaikha.
N'aka nke ọzọ, Burei ka bụ nzukọ na-enye obi ụtọ. Onye ndu ọ bụla na-eketa ọkwa ya site na ọrụ ọrụ afọ asaa ya na onye ndu ọzọ, na-esote nraranye ya, bụ nke a na-ekwu n'oge ahụ ka ọ mepee igbe nke ya, na-anọghị na onye ndụmọdụ ya, onye omume ya bụ onye zarị ya ga-agbanwe ugbu a. N'ihi ya, ya na "nne ya ochie" nọ na-akpakọrịta, mana ndị isi ndị ọzọ ọ nhata. A na-eme ka ọnọdụ a sikwuo ike mgbe a kpọrọ ya ka ọ gaa emume na otu n'ime ụlọ ndị ọzọ nke zar, maka emume Rajab ma ọ bụ ihe mkpuchi. Ọ na-ewe nke ya ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ iji chebe onwe ya na mmụọ ya pụọ ​​na anyaụfụ ma ọ bụ nsogbu nwere ike ịdị na gburugburu ebe a, mana a na-emeso ya dị ka onye asọpụrụ, na onye ọbịa.
Ma na burei na tombura, “ụmụ agbọghọ” na-enyere onye ndu ọ bụla aka (ụmụ nwanyị na-azụ onwe ha maka iwusi ike ha ike na zar) ndị na-akwadebe ihe ọjọọ ya; debe ite nke ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ juputara na ndị ọrịa na-achọ enyemaka; lekọta onye ndu ahụ ka ọ na-akpa ike ma nyere aka gbochie mmụọ ndị na-enupụ isi; zoputa ihe ndi choro; ma ọ bụ mee ka ụlọ ọrụ ndị isi na ọrụ dị oke mkpa ma na-ewe oge. Fọdụ n'ime ndị enyemaka a na-atụ anya ịbụ ndị isi n'onwe ha n'oge ụfọdụ, ma na-etinye oge na akụ na ụba na-aba ụba maka enyemaka ha na nhazi ọrụ afọ asaa. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ mmadụ ole na ole na-enwe ihe ịga nke ọma n'imezu ebumnuche a.
Site na ihe ndekọ izizi edere banyere zar, nkwenye na omume ndị a ejirila omume "oge gboo" nke ụmụ nwanyị, nke ndị na-ekiri ihe na-eme nwoke, ndị obodo na mba, ndị mmụta na ndị ikwu, na-eweda n'ala. Ọmụmụ ihe na-emetụta echiche a na edemede nke onye ọkà mmụta ihe banyere ala mmadụ IM Lewis (1930–2014), ọ na-aga n'ihu na-emetụta ụfọdụ ederede banyere Sudanese zar (Lewis 1971). Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịkpụzi echiche ndị si mba ọzọ banyere zar, ọ bụ okwu enweghị mmasị ma ọ bụ ịkwa emo nye ndị na-adepụ, bụ ndị chere na nke a na-egosi etu ụmụ mpụta si amata ihe banyere zar.
Na narị afọ nke iri abụọ na otu, a na-eche ọtụtụ ihe ịma aka ndị ọzọ aka ọjọọ. Ihe kacha dị egwu bụ ịrị elu nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị Islam. Alakụba nke gbasara na mpaghara a dị ka narị afọ nke iri na ise bụ echiche Sufi na ndidi. Kemgbe etiti narị afọ nke iri abụọ, agbanyeghị, ụdị Islam nke Wahhabi na-enwetala ịrị elu, na-akwụsị na itinye iwu nke Shari'a na 1983 na ndị agha na-esote nke 1989, nke guzobere ala Alakụba. N’afọ ndị 1990, amachibidoro ihe omume ndị amị kpam kpam, na-awakpo emume dị iche iche, na-akụ ndị isi ihe, nara ha ego, na tụba ha n’ụlọ mkpọrọ. Ọ bụ ezie na egwu ndị a adịghịzi na-arụ ọrụ site na 2000, ụmụ nwanyị na-ala azụ ịme mmemme ha na ebe ndị a ma ama, na-ahọrọ ụlọ ndị na-adịghị ahụkebe na mpaghara ndị dara ogbenye, na-ele anya anya ndị Islamist na ndị ọrụ nchekwa. Ejiri nlezianya leba anya mgbe a na-achịkwa iwu, ọbụlagodi mgbe ọ dị ha ka e buliri ya na gọọmentị, ma ekweghị ka ndị mmụọ Khawaja (European) ma ọ bụ Black ojii jụ ihe ha chọrọ maka mmanya siri ike, ihe na-adịkwaghị adị ebe ọ bụ na iwu Shari'a malitere.
Nye ọtụtụ ndị Alakụba siri ike taa, a na-ahụ zar dị ka ihe amachiri (machibidoro iwu), ọbụna nkwulu. Nkwenkwe ndị nwere olundị na-a drinkụ ọbara na mmanya na-aba n'anya dị ka akụkụ nke ememe ahụ ka zuru ebe niile, na-eme ka echiche a sie ike. Nke a nwere ike ịbụ otu narị afọ gara aga, mana na ncheta ndụ a na-akọwa senti a kpọrọ "Girl Girl" (Bit as-Sudan) dị ka ọbara na ị drunkụbiga mmanya ókè, agwakọtara ya na ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ, iji mee ka obi jụrụ ndị mmụọ. A drinksụghị mmanya na-aba n'anya ugbu a, nke a na-ekwu na ọ bụ isi ihe kpatara na ndị mmụọ Europe anaghịzi eleta. A na-ahụkwa Zar dịka mgbochi Alakụba, n'agbanyeghị na ọtụtụ nzukọ ya na emume ya sitere na Sufi. N'ihe na-abawanye ụba, agbanyeghị, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị Sudan na-aga njem uka Mecca wee laghachi na echiche Wahhabi siri ike banyere Islam. Ndị a gụnyere echiche na zar, nke amachibidoro n'alaeze Saudi.
N'ime ọkara afọ gara aga, mmuta na agụm akwụkwọ zuru ebe niile, ọkachasị maka ụmụ nwanyị, emetụtakwala echiche banyere zar zar. Site na ụlọ akwụkwọ na ụlọ alakụba, ụmụ nwanyị na-amụ ụzọ dị iche iche a ga-esi eche echiche, nke a gụnyere n'ihe banyere zar dị ka ihe na-aga n'ihu, nke mgbe ochie, na ihe mgbe ochie. Mgbalị ndị Alakụba gbalitere imepụta ndị Alakụba siri ike na ụmụ amaala nke oge a enweghị ebe obibi maka emume na nkwenkwe nke zar. Ihe ngosi telivishọn nke gọọmentị na-achịkwa banyere Sudan na ọdịbendị ya mere ka echiche ndị a sikwuo ike, bụ nke a na-egosipụta zar dị iche iche dị ka ọdịnala ọdịnala mara mma ma ọ bụ dịka ihe amachibidoro ezigbo ndị Alakụba. Igwe onyonyo n’onwe ya emetụtakwala ndụ ndị Sudan. Usoro ihe omume a na-ewu ewu n’oge a na-eme mgbede, bụ nke ọdịnala na -emekarị oge iji gaa ndị agbata obi, butere ndakpọ nke mmemme ọhaneze na ịdị mfe ịga n’etiti ndị ezinaụlọ mara agwa naanị otu ọgbọ gara aga, nke nyeere aka mee ka ndị mmadụ bụrụ ndị ama ama. formal zar eme.
A na-ekewa ọha mmadụ Sudan, dịka ọtụtụ nke ụwa Alakụba site na nkewa nke nwoke, na taa a na-ahụta dịka akụkụ nke ọdịbendị ụmụ nwanyị, ọbụlagodi dịka a na-eme ya dịka akụkụ nke ọdịnala ọdịnala Sudan. Ọ ka bụ otu mpaghara ihe ọmụma ebe ụmụ nwoke na-abanyekarị nghọta ụmụ nwanyị, n'agbanyeghị na n'oge gara aga ụmụ nwoke na-arụsi ọrụ ike na omume na nzukọ ya. Na Sennar, ndị mmadụ na-echeta di Zainab Marajan, onye na-eme zar nugara, ya na emume ya dị egwu nke gụnyere ịgba egwu na icheku ọkụ na ị consumụ mmiri esi mmiri. Edere ihe ndị a dị ka ihe atụ nke otu ịchụ nta ego siri ike n'oge gara aga mgbe ụmụ nwoke na-elekọta.
N’akụkọ ihe mere eme nile nke Sudan, agbanyeghị, ọ bụ ụmụ nwoke ka ebu ụzọ gbanwee ma gbanwee: ịgbanwe Islam, bụrụ ezigbo ụmụ amaala colonial, ka ha bụrụ ndị gụrụ akwụkwọ na mba nke oge a. Nke a na-emewanyewanye ike n'aka ụmụ nwanyị, ma ọ bụrụ na ọ nọghị ebe ahụ. Nugara lara n'iyi na ụdị zar nke achọpụtara taa bụzị ndị genteel, ọbụlagodi na ha na-aga n'ihu na-egbo mkpa nke ndị mgbaàmà a chọpụtara dị ka ihe onwunwe. Mụ nwoke nwere ike ịbanye n'ọgba aghara na emume Sufi, mana nnweta nke mmụọ uhie bụzi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwanyị, ebe nghọta nke "ike karịrị mmadụ" na-ebelata site na nzụlite na ile ọbịa, na mkparịta ụka na ụwa mmụọ nwere ike bụrụ ihe ịtụnanya, dị egwu, mara mma otu.
N'ikpeazụ, ọ dị mma ịmara na ọ bụ ezie na ịnwe mmụọ nwere ike iyi ihe iju anya, nke na-ekwekọghị n'okike nye ndị si n'èzí, ndị na-ekweghị ekwe, na ndị na-ekweghị ekwe, ọ na-eme n'ọtụtụ obodo (Bourguignon 1991; Di Leonardo 1987). N'agbanyeghị mbọ a a na-agba igbochi “okpukpe dị iche iche” dị otú ahụ, ha egosipụtawo nguzosi ike dị ịrịba ama, ma nọgide na-adọta ndị adepụ ọhụrụ. Fọdụ ndị ode akwụkwọ metụtara nke a na ọnọdụ ebe mmegbu na ihe ike ọha na eze juru ebe niile (ịmaatụ Kwon 2006; Lan 1985). Ndị ọzọ (dịka Lambek 1993; Palmié 2002) egosila na ọ bụghị naanị na mmụọ ịnwe mmụọ na-aga n'ihu na-egbo mkpa obodo, kamakwa na-enyekwa akwụkwọ akụkọ ndị ọzọ na-agbagha okwu a na-ekwukarị n'oge a yana echiche anyị banyere okpukpe na ndụ nke oge a.
Foto # 1: mmụọ Darawish. Foto dị n'aka onye edemede na Sennar, 2001.
Foto # 2: mmụọ Pashawat na-aga n'ihu. Foto sitere n'aka onye edemede na Sennar, 2001.
Foto # 3: Karama, ya na ndi egwu na kursi nke onyinye nye zar. Foto sitere n'aka onye edemede na Sennar, 2004.
Image # 4: ndụmọdụ Zar na Bashir. Foto dị n'aka onye edemede na Sennar, 2001.
Foto # 5: Al-Sittat (Luliya). Foto dị n'aka onye edemede na Sennar, 2001.
Foto # 6: Dasholay nwere onye enyemaka na igbe. Foto sitere n'aka onye edemede na Sennar, 2004.
Al-Nagar, Samia al-Hadi. 1975. "Inwe Mmụọ na Mgbanwe Ọha na Omdurman." M.Sc. Akwụkwọ edemede. Mahadum nke Khartoum.
Onwuchekwa, Janice. 1989. Umu nwanyi na ndi ozo. Madison, WI: Mahadum nke Wisconsin Press.
Bourguignon, Erika. 1991. Inwe. Ugwu Prospect, IL: Waveland Press
Constantinides, Pamela. 1972. "Ọrịa na Mmụọ: Ọmụmụ banyere Okpukpe Mmụọ nke 'Zar' na Northern Sudan." Ph.D. akwukwo. Mahadum London.
Di Leonardo, Micaela. 1987. "Oral History dị ka Ethnographic na-ezute." Nyochaa Oral History 15: 1-20.
Hurgronje, C. Nkpu. N'afọ 1931. Mekka na akụkụ ikpeazụ nke narị afọ nke 19. Leyden: EJ Brill.
Kenyon, Susan M. 2012. Mmụọ na ndị ohu na Central Sudan: Red Wind of Sennar. New York: Palgrave MacMillan.
Nwachukwu, CB 1878. Egypt di elu: Ndi Ya na Ngwa Ya. London: Blackie & Nwa.
Kwon, Heonik. 2006. Mgbe mgbuchapụ ahụ gasịrị: Ememe Ncheta na Ngụgụ Obi na Ha My na My Lai. Berkeley: Mahadum California Press.
Lambek, Michael. 1993. Ihe omuma na Omume na Mayotte: Mkparịta ụka nke Alakụba, ịgba afa, na Inwe Mmụọ. Toronto: Mahadum Toronto Press.
Lan, David. 1985. Egbe na mmiri ozuzo: Ndị agha na mmụọ mmụọ na Zimbabwe. London: James Curry.
Lewis, IM 1971. Okpukpe nke Okpukpe. Harmondsworth, UK: Akwụkwọ Penguin.
Lewis, IM, A. al-Safi, na Sayyid Hurreiz, eds. 1991. Ọgwụ ụmụ nwanyị: Zar-Bori Cult in Africa and Beyond. Edinburgh: Mahadum Edinburgh Press maka International African Institute.
Makris, GP 2000. Ndị Na-agbanwe Agbanwe: Inwe Mmụọ na Njirimara Amata n'etiti ndị ohu na ndị ọzọ nọ na Sudan. Evanston, IL: Mahadum Northwest University.
Natvig, Richard. 1987. "Ndị Oromo, Ndị Ohu, na Mmụọ Zar: Onyinye na Akụkọ Ochie nke Zar Cult." Akwụkwọ bụ International Journal of African Historical Studies 20: 669-89.
Palmié, Stephan. 2002. Ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị: Nyocha na oge Afro-Cuban na ọdịnala. Durham, NC: Mahadum Duke University.
Seligman, Brenda Z. 1914. "Na Mmalite nke Ijipt Zar." Ndi mmadu 25: 300-23.